Ra’iisul Wasaaraha, Madaxda Puntland, Jubbaland iyo Galmudug oo soo gaarey Muqdishu – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ra’iisul Wasaaraha, Madaxda Puntland, Jubbaland iyo Galmudug oo soo gaarey Muqdishu
7th December 2015 MAREEG Af Soomaali 0
Madaxweynaha dowlad gobaleedka jubaland Axmed Maxamed Islaam iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa duhurnimadii maanta kasoo degay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ee Caasimada Soomaaliya.
Wafdi heer wasiir oo xukuumada Soomaaliya ka tirsan, xildhibaano iyo saraakiil ciidan ayaa wafdiga madaxweynaha jubaland kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cade international air port ee Magaalada Muqdisho.
Soo dhaween kadib madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo warfidiyeenada kula hadlay qeybta nasiinada ee garoonka diyaaayaaradaha ayaa faahfaahin ka bixiyay socdaalka uu maanta muqdisho ku yimid iyo sidoo kale waawaantii uu u tagay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo todobaadkii lasoo dhaafay xiisad u dhaxeysay Galmudug iyo Puntland ay ka jirtay.
Waxa uu sheegay in ay ku guuleysteen dadaalladii nabadeed ee ay ka sameeyeen magaaalada galkacyo ugu dambeyna dadkii shacabka ahaa ee horay uga barakacay magaaladaasi ay dib ugu soo laabteen magaalada.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay ujeedka socdaalkiisa Muqdisho isagoo sheegay in uu ka qeybgali doono gunaanadka shirka hiigsiga sanada 2016 ka ee kasocda magaalada muqdisho kulamana uu la qaadan doono madaxda dowlada.
Maamulka Baraawe oo sheegay in ay qabteen Hoggaamiye cadaan ah oo ka tirsanaa Al Shabaab
Shirka Madasha wadatashiga Qaran oo maanta ka furmaya Muqdisho